Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye Minista njem nlegharị anya wutere ọnwụ nke Jamaica Songbird
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • Music • News • Tourism
Onye na -agụ egwu Jamaica Karen Smith gafere
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na ndị ọrụ njem nlegharị anya ndị ọzọ na-eru uju ọnwụ onye ama ama a ma ama, Karen Smith. Smith, onye rụrụ ọtụtụ iri afọ dị ka onye na -agụ cabaret n'ofe mpaghara ntụrụndụ niile, nwụrụ na mbụ taa.
Karen ghọrọ aha ezinụlọ na njem nlegharị anya na Jamaica sara mbara.
Ọ ghọrọ ihe ntụrụndụ na njem nlegharị anya ma bụrụ onye na -eme ihe nkiri maka ọtụtụ emume na mpaghara.
Smith bụbu onye isi oche nke Jamaica Federation of Musicians and Affiliates Union wee nata Order of Distinction na ọkwa onye ọrụ.
“Akụkụ njem njem niile na -eru uju ọnwụ Karen Smith onye wetara ọmarịcha ọkụ na nka na mmemme ya. M na -akasi ezinụlọ ya, ndị enyi ya na ndị ọrụ ibe ya obi, "Minista Bartlett kwuru. Minista Bartlett gbakwụnyere, "Karen ghọrọ aha ezinụlọ na njem nlegharị anya na Jamaica ka ukwuu na njiri mara ya na olu pụrụ iche."
“Obi dị m ezigbo ụtọ na m bụ enyi Karen, ọ bụ n'ezie amara, amara na imepụta ihe. Ọ bụghị naanị na egwu ya masịrị ọtụtụ n'ime anyị mana o meela ka obi ruo ọtụtụ mmadụ ala n'ọnọdụ dị iche iche. A ga -echetakwa ya maka ezigbo onye ndu o nyere ndị otu egwu, "o kwuru.
Smith bụbu onye isi oche nke Jamaica Federation of Musicians and Affiliates Union ma bụrụkwa onye natara Order of Distinction na ọkwa onye isi.
“Karen na ihe ntụrụndụ yiri na njem nleta ma bụrụ onye na -eme ihe nkiri maka ọtụtụ emume na mpaghara. Ị maara na ozugbo edere Karen akwụkwọ, ihe ngosi a ga -enweghị nkebi na itinye aka, "Onye ntụzi njem, Donovan White kwuru.
Amara maka egwu gụnyere "Paradaịs," "Achọrọm Onye -nwe," na "Enwere m ike ịda," Smith bụkwa otu ụzọ n'ụzọ atọ nke otu, Pakage, nke gụnyere ndị ọbụ abụ Gem Myers na Patricia Edwards.